C/raxmaan C/shakuur “Waxay arrintu taagan tahay hadii xilliga dhamaado sidee la yeelaa..” – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
C/raxmaan C/shakuur “Waxay arrintu taagan tahay hadii xilliga dhamaado sidee la yeelaa..”
C/raxmaan C/shakuur Warsame oo ka mid ah siyaasiyiinta haatan u sharaxan jagadda xilka madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday in wixii ka dambeeya bisha Septembar 9-keeda aanu Xasan Sheekh Maxamuud sheegan karin madaxweyne, loona baahan yahay inuu xilka ka dego oo la dhiso dowladda KMG ah.
C/raxmaan C/shakuur oo wareysi siiyay mid ka mid ah idaacadaha magaalada Muqdisho ayaa sheegay in marka hore loo baahan yahay in la xushmeeyo dastuurka dalka, islamarkaana aanay haboonayn in Xasan Sheekh uu ku dhagnaado kursiga mar hadii uu waqtigiisa u dhamaado.
“Waxay arrintu taagan tahay hadii xilliga dhamaado sidee la yeelaa, wixii 9-ka bisha Sepember ka dambeeya Xasan Sheekh iyo Cumar C/rashiid waa inay xilalka wareejiyaan, anaga nala mid noqdaan, sharciyadii waa ka dhamaatay..” Sidaasi waxaa yiri C/raxmaan C/shakuur Warsame.
Dhinaca kale, wuxuu C/raxmaan C/shakuur dowladda Xasan Sheekh Maxamuud ku eedeeyay inay ku fashilantay wax waliba oo ay balan qaaday, isla markaana aysan cudur-daar ka dhigan karin xaalad iyo caqabado maadaama loo doortay inay xaaladaasi dalka ka gudbiyaan, wuxuuna soo jeediyay in dalka loo sameynayo dowlad KMG ah oo doorashada hirgelisa.
“Teeda kale, waxaa muuqata inay doorasho ku dhici karin xilligii loo qorsheeyay, waxaana golaha ammaanka meel u yaala qaraar lagu caddeeyay inaan hal maalin loogu dari karin hay’adaha dowladda ee haatan dalka ka jira, siiba fulinta iyo madaxtooyada” Ayuu hadalkiisa raaciyay C/raxmaan C/shakuur.
Ugu dambeyntii, C/raxmaan C/shakuur ayaa sheegay in hadii uu Xasan Sheekh Maxamuud xilka ka dego uu guddoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya Prof. Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari uu noqon karo madaxweyne KMG ah oo ilaa madaxweyne cusub laga soo dooranaayo xilka sii haaya.